cuttiepinkgold | The World of Pinkgold
Author Archives: cuttiepinkgold
Posted on December 2, 2013 by cuttiepinkgold
Letter to My Little Brother – (1)
မောင်လေးသို့ ပေးစာ – (၁)
နေလို့ကောင်းရဲ့လား။ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ မတူညီမှုတွေကြားမှာ နေထိုင်ရတာဟာ ခက်ခဲပေမယ့် ရသတော့ မြောက်ပါတယ်ကွယ်။ ဒီမတူညီမှုတွေ ကြားကပဲ အတွေ့အကြုံတွေ၊ သင်ခန်းစာတွေ ရလာပြီး ၊ ပိုသိ ပိုတတ်အောင် မမတို့ သင်ယူကြရတာပဲလေ။ ဒီအခက်အခဲတွေကပဲ ခွန်အားတွေကို ဖြစ်စေပြီး နေ့သစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေစေတာ မဟုတ်လား။ မောင်လေးက လူတော်လေး တစ်ယောက်ပဲကွယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ အားငယ်တတ်တဲ့ မောင်လေးကို မမက အားပေးချင်ရုံသက်သက်ပါ။ ဒီနေ့ မမရဲ့ အတွေ့အကြုံလေး တစ်ခုကို မောင်လေးကို ပြောပြချင်လို့ ဒီစာကို ရေးလိုက်ရတာပါ။
မောင်လေး သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ ဟိုနေ့က မမ မန္တလေးကို သွားလိုက်တယ် မဟုတ်လား။ ပြည်တွင်းမှာ သွားရတဲ့ ပထမဆုံး လေကြောင်းခရီးဆိုတော့ မမစိတ်တွေ သိပ်ကိုလှုပ်ရှားနေခဲ့တာ ညအိပ်မပျော်တဲ့အထိပေါ့။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေရဲ့ သတင်းကလည်း ပါးစပ်ပြောတွေနဲ့ မွှေးနေခဲ့တာကိုး။ အဲ့ဒီနေ့က မနက် ၆း၁၅ လေယာဉ်စီးရမှာဆိုတော့ Check In မီအောင် တစ်နာရီလောက် စောရောက်နေဖို့လိုတယ်လေ။ ဒီတော့ မနက် ၅း၁၅ လောက်ရောက်အောင် သွားဖို့ ပြင်ဆင်ရတာပေါ့။ အိပ်လို့ကလည်း ပျော်တစ်ချက်၊ မပျော်တစ်ချက်ဆိုတော့ မနက် (၄) နာရီလောက်ကတည်းက နိုးနေပြီး ပြင်ဆင်စရာလေးတွေ ပြင်ဆင်ရတာပေါ့။ နေ့ချင်းပြန်ခရီးဆိုတော့ ယူစရာကလည်း Laptop တစ်လုံးနဲ့ မမလွယ်နေကျ အိတ်တစ်လုံးပဲ ပါတာဆိုတော့ ဗာဟီရ မများလှပါဘူး။
ပြသနာကတော့ မမအိမ်က ထွက်တဲ့အချိန်ပေ့ါ။ မနက် (၄) နာရီခွဲမှာ အိမ်ကထွက်ပေမယ့် ခြံတံခါးက အဲ့အချိန်မှ မဖွင့်သေးတာကြီးကို။ အိမ်ရှင်တွေကိုလည်း ခရီးသွားမယ့်အကြောင်း ကြိုမပြောထားမိဘူးလေ။ သူတို့ကိုထခိုင်းရမှာလည်း အားနာသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ငယ်ငယ်တုန်းက လုပ်နေကျ အကျင့်တွေ ပြန်ပေါ်လာရတော့တာပါပဲ။ မိန်းကလေး ဖြစ်တဲ့ မမတစ်ယောက် ခြံကျော်တက်မိမယ်လို့ မောင်လေး တွေးလို့မှ ထားရဲ့လား။ မတတ်နိုင်ဘူး မောင်လေးရဲ့။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကိုကြည့်ပြီး လိုသလို အသုံးချရတာပါပဲ။ မိန်းကလေး မဆန်လိုက်တာလို့တော့ မပြောပါနဲ့ကွယ်။ မိန်းကလေး ဆန်လွန်းတာက တစ်ခါ တစ်လေတော့လည်း အလုပ်မှာ နှောင့်နှေးမှုတွေကို ဖြစ်စေတယ်လေ။ တစ်ခါ တစ်လေ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေကို မမ အားမရဘူး။ အရာရာမှာ နှောင့်နှေးလို့ မဖြစ်သလို၊ တစ်ခြားသူတွေကိုလည်း အားကိုးလို့ မရဘူးလေ။ ခုလို မြန်ဆန်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ တစ်ခြားသူတွေကို အားကိုးဖို့ဆိုတာက ပိုလို့တောင် မဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ အဖော်ပါမှ လုပ်မယ်၊ သွားမယ်၊ လာမယ် ဆိုတဲ့မမတို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ အကျင့်ကို နည်းနည်းတော့ ဖျောက်ထားသင့် ဖျောက်ထားရမယ်။ တစ်ကယ့်ကို သတ္တိရှိပြီး ၊ သွက်လက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကြောက်စိတ်လေးတွေကိုလည်း ဖျောက်ထားရမယ်။ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေ ရှိသေးတယ်။ အိမ်က တစ်ယောက်ယောက်ပါမှ ခရီးသွားတာမျိုးတွေ၊ အိမ်က လိုက်ပို့မှ သွားရဲ လာရဲတွေ။ ဒါကတော့ မိဘတွေရဲ့ ပျိုးထောင်မှုတွေနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်လေ။ တစ်ချို့မိဘတွေကျတော့လည်း တမင်တကာကို သူတို့ပါမှ လုပ်ရဲ ကိုင်ရဲ သွားလာရဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာအောင် သားသမီးတွေကို ပျိုးထောင်ထားတတ်ကြသေးတယ် မဟုတ်လား။ မမအထင်ကတော့ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးတွေကို သူတို့မရှိလည်း အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲအောင် ၊ ဆုံးဖြတ်ရဲအောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်တယ်လို့။
ကဲထားပါတော့လေ မမအကြောင်းပဲ ဆက်ပြောပြပါ့မယ်။
အဲ့နေ့က ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ကို ထွက်တော့လည်း ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရယ်။ မနက် လင်းအားကြီးဆိုတော့ တက္ကစီလည်း ရှားတာပေါ့ မောင်လေးရယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ မမ နည်းနည်း သတိထားရတာပေါ့။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေအရ ကိုယ့်ကို တစ်မျိုးထင်မှာလည်း ကြောက်ရသေးတယ်လေ။ ကိုယ့်ရဲ့ အမူအရာ ၊ အနေအထိုင်တွေကိုက အစ တစ်ပါးသူ အမြင်မမှားစေအောင်တော့ ပြင်ဆင်ထားရတာပေါ့။ တက္ကစီသမားတွေကလည်း ဂွကျပါတယ် မောင်လေးရယ်။ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ လေယာဉ်ကွင်းကို (၅၀၀၀)တောင် တောင်းတယ်။ နေ့ခင်းဘက် ကားကျပ်ချိန်တွေမှာ အဲ့ဒီဈေးတောင်းတာကို မမ မပြောလိုပေမယ့် ခုလို ကားရှင်းတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ တောင်းတာကတော့ လွန်လွန်းအားကြီးတယ်လေ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း သဘောကောင်းတဲ့ တက္ကစီသမားနဲ့ တွေ့ပြီး (၃၅၀၀) နဲ့လေဆိပ်ကို ရောက်လာတာပေါ့။ အဲ့ဒီနေရာမှာ မမပြောချင်တာ ရှိသေးတယ်။ အဓိက ကတော့ မောင်လေးတို့ယောင်္ကျားတွေကိုပေါ့။ ဒီခေတ်က အရင်ခေတ်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး မောင်လေးရဲ့။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ တို့တွေလည်း လိုက်ပြောင်းလဲနေကြရတာပဲလေ။ အဲ့တော့ ညနက်သန်းခေါင်မှာ လမ်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို အတွေးတစ်မျိုးနဲ့ မတွေးစေချင်ဘူး။ ခုဆို ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်း အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ မမတို့လို အိမ်ပြန်နောက်ကျသူတွေ၊ မနက်လင်းအားကြီး (၄) နာရီလောက်မျိုးမှာ သွားလာရေးအတွက် လမ်းပေါ်မှာ တက္ကစီထွက်ငှား ရသူတွေ ရှိလာနေကြပြီ။ မိန်းကလေးတွေလည်း ယောင်္ကျားလေးတွေလို တန်းတူ အလုပ်လုပ်လာ ကြရပါပြီ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောဆိုဆက်ဆံတာမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ တစ်ခြား ယောင်္ကျားလေးတွေ အဲ့လို အမြင်တွေ ရှိနေတုန်းပဲ ဆိုရင်တောင် မောင်လေးကတော့ မပါပါ စေနဲ့ကွယ်။ မောင်လေးသာ ညဘက်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ မြင်နေမှာဆိုရင်တော့ မမလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။
အမှန်တော့ အဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးကို မှားတယ်လို့လည်း မမက မဆိုချင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေတွေကြောင့်လည်း သူတို့ခမျာ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေကြရရှာတာပါ။ မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေလို့လည်း သူတို့ကို မမက နာမည် မတပ်ချင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါကလည်း သူတို့ရဲ့ အလုပ်ပဲကို။ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ဥပဒေတွေ တစ်နေ့မှာတော့ ခိုင်မာလာမယ်လို့တော့ မမက မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲ့လို မိန်းကလေးတွေအတွက် ပိုပြီးတော့ စနစ်ကျတဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိလာအောင် တာဝန်ရှိသူတစ်ချို့လည်း လုပ်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား။
ကဲပါ မောင်လေးရေ လေယာဉ်ကွင်းရောက်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးကို မမ ဆက်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ မြန်မာတွေ စည်းကမ်းပိုင်းမှာတော့ တော်တော်လိုသေးတာကို တွေ့ရတုန်းပါပဲ မောင်လေးရေ။ Check In အတွက် တန်းစီတာမျိုးလည်း မရှိကြဘူး။ သူများရှေ့ကနေ အတင်းကို ကျော်တက်ပြီး Check In ၀င်တော့တာပါပဲ။ တစ်ခါ တစ်လေ သူများတွေ Check In နေချိန်မှာတောင် အတင်းကိုသွားပြီး လက်မှတ်တပြပြနဲ့ လုပ်နေတတ်ကြသေးတာ။ အထူးသဖြင့်တော့ လူကြီးတွေပေါ့။ လူငယ်တွေကလည်း အတ္တနည်းသေးလို့လား မသိပါဘူး။ အတင်းကျော်တက်တာမျိုးတွေ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ကျော်တတ်သွားကြပေမယ့် မမကတော့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ဖို့ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပဲ စောင့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ စကားစပ်လို့ မောင်လေး မမေးခင် ပြောရအုံးမယ်။ မမက Golden Myanmar Airline နဲ့ သွားတာကို။ အဲ့လေကြောင်းကို မောင်လေးတို့လည်း စီးကြဖို့ မမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ၀န်ဆောင်မှုလည်း မဆိုးဘူး။ လေယာဉ်မယ်လေးတွေကလည်း သိပ်ချောတယ်။ အပြောချိုချို၊ အပြုံးချိုချိုနဲ့ ခရီးသည်တွေကို စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။ လေယာဉ်စီးရတာကတော့ နိုင်ငံခြားသွားသလိုမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ်နဲ့ လမ်းကြမ်းမှာ ကားစီးနေရသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဆင်တော့ ပြေပါတယ်ကွယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မပင့် တစ်ယောက် မန္တလေးကို လေယာဉ်ပျံနဲ့ ရောက်သွားလေသတည်းပေါ့။
ကဲမောင်လေးရေ စာလည်း တော်တော်ရှည်သွားပြီ။ နောက်များမှပဲ တစ်ခြားအကြောင်းတွေကို မမဆက်ပြောပြအုံးမယ်နော်။ မမရဲ့ စာကို ဖတ်ရတာ မောင်လေး ပျင်းများသွားပြီလား။ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ဂရုစိုက်ပါနော်။
Posted on February 18, 2013 by cuttiepinkgold
ည (၁၁) နာရီလောက်ဆို သူ့ဆီက မက်ဆေ့လေးတွေ ရောက်ရောက်လာတတ်တယ် ။ “အိပ်နေပြီလား” ၊ “ကောင်းသော ညလေးပါခင်ဗျာ” အဲ့လို အဲ့လို အစချီထားတဲ့ မက်ဆေ့လေးတွေပေါ့။ တစ်ကယ်ဆို ကျွန်မအတွက် ည (၁၁) နာရီဆိုတာ အိပ်ဖို့ သိပ်စောနေသေးမှန်း သူမသိတာလည်း မဟုတ်။ အဲ့လို မက်ဆေ့လေးပို့တာကနေ အစချီပြီး အပြန်အလှန် စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ညပေါင်းလည်း မနည်းတော့ဘူးပဲ။ တစ်ခါ တစ်လေ ဖုန်းနဲ့ ၊ တစ်ခါ တစ်လေ ဂျီတော့ပေါ်မှာ ၊ တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေကြာလာတော့ ည (၁၁) နာရီလောက်ဆို ကျွန်မ သူပို့လာမယ့် စာလေးတွေကို မျှော်တတ်လာတယ်လေ။
သူက ကျွန်မထက် အသက်နည်းနည်းပိုကြီးတယ် ။ ရီစရာကောင်းတာ တစ်ခုက သူနဲ့ကျွန်မက ဖုန်းထဲမှာ စကားပြောရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စကားပြောရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီးရင်းနှီးပွင့်လင်းကြပေမယ့် အပြင်မှာတွေ့ဖြစ်ကြရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နည်းနည်းရှိန်ပြီး ရှက်သလိုဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။ အပြင်မှာတွေ့ပြီး လမ်းခွဲ.. ညဘက်ရောက်လာတော့ ပုံမှန်အတိုင်းလည်း စကားပြောရော နေ့လည်က မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး သိလား ဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်အကြာကြီးစကားတွေ ပြန်ပြန်ပြောဖြစ်ကြတာလည်း ခဏ ခဏ ပါပဲ။ တစ်ချို့ရက်တွေမှာကို ကျွန်မနဲ့တူတူညစာလိုက်စားတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်မကို လက်ဆောင်လေးတွေလည်း ပေးတတ်သေးတယ်။ ဘယ်လိုသဘောလဲလို့ ကျွန်မကမေးတော့ “ကျွန်တော်က ညို့ကို လေးစားချစ်ခင်ပါတယ် ခင်ဗျာ” တဲ့။ ဟင်.. ဘယ်လိုကြီးလည်းကွယ်။
ယောင်္ကျားတွေ ပြောတတ်တဲ့ စကားရှိတယ်။ “မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို ချစ်နေတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လံထားတတ်သတဲ့” လေ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကို ရှင်တို့ အပြည့်အ၀ နားလည်လို့လားကွယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်မှာ ယောာင်္ကျားတစ်ယောက်ထက်ကို ပိုပြီးတော့ ပေးဆပ်ရတာတွေရှိတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ အငွေ့အသက်တွေကလည်း မိန်းမကို အလိုအလျောက်ပြုပြင်တတ်ကြသေးတယ်။
ရည်းစားထည်လဲတွဲတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောဆိုရုံလောက်သာ ဖြစ်တတ်ကြပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့တော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ၀ိုင်းပယ်ထားခြင်းကို ခံရကောင်း ခံရနိုင်သေးတယ်လေ။ ကျွန်မတို့ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ပိုပြီးပွင့်လင်းလာလို့ ပြောဆိုတာတွေ လျော့သွားကြပေမယ့် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မသိစိတ်မှာ ဒါကြီးက အရိုးစွဲနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ယောင်္ကျားသားတွေကို နားလည်စေချင်သေးတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေ မူတာ မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်။ အရွေးမှားမှာ စိုးလို့ စောင့်ကြည့်နေကြရတာပါ။
Posted on December 21, 2012 by cuttiepinkgold
ရန်ကုန်သို့ အပြန်လမ်းသည် ပျော်စရာထက် လွမ်းစရာပိုများနေသည်။ ပင်လယ်ကြီးကို ထားခဲ့ရပါအုံးမည်။ ပင်လယ်လေကို လွမ်းနေရပါအုံးမည်။ ချောင်းသာကမ်းခြေသည် ဘ၀၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် အမှတ်တရ ရှိနေအုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြန်လမ်းတစ်လျှောက် တိတ်ဆိတ်နေကြသော အဖွဲ့သားအားလုံးကို လှုပ်လှုပ်ရွရွ ပြန်ဖြစ်စေတာကတော့ နွေဦးဖြစ်သည်
“ပျင်းတယ်ဗျာ.. သီချင်းဆိုတမ်း ကစားရအောင်”
“အိုးကေ.. မိုက်တယ်.. ဘယ်လိုဆိုမှာတုန်း”
“နှစ်ဖွဲ့ပြိုင်မယ်ဗျာ…. တစ်ဖွဲ့က သီချင်းစဆိုမယ်.. ပြီးတော့ ကိုယ်ရပ်ချင်တဲ့နေရာမှာ ရပ်မယ်.. အဆုံးစာလုံးနဲ့ နောက်တစ်ဖွဲ့က သီချင်းပြန်စဆိုရမယ်.. ဘယ်လိုလဲ”
“လုပ်လိုက်လေ.. ကြာသလားလို့.. ငါတို့အဖွဲ့မှာ ရက်ပါရော.. ရော့ကာရော.. အော်တာတွေရော အစုံရှိတယ်”
နွေဦးနှင့် ဘိုဘိုတို့၏ ဆော်သြမှုကြောင့် တစ်ကားလုံး ဆူဆူညံညံနဲ့ သောင်းသောင်းဖြဖြပြန်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်လမ်းလုံး သီချင်းတွေဆိုကြရင်း ဆော့လာလိုက်ကြတာ .. ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့မှ အသံတိတ်ကြတော့သည်။ လှည်းတန်းကိုရောက်တော့ ည (၁၁) နာရီထိုးပြီး ။ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး လှည်းတန်းမှာပဲဆင်းပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် အသီးသီးပြန်ကြသည်။
ဖြိုးပိုင်က ပြန်ကာနီးလေး လာမေးတော့ မေးဖော်ရသော သူ့ကို ကျေးဇူးတင်စွာ ကြည့်ရင်း ဖြေမိသည်။
“ကျွန်တော်က သာကေတပြန်မှာဗျ.. အိမ်က ကားလာကြိုမှာ.. အမတို့ကိုလည်း လိုက်ပို့ခဲ့မယ်လေ.. အားမနာပါနဲ့ဗျ”
သူကပြောတော့ လမ်းကြုံသောသူတွေ စုပြီး တူတူပြန်ဖြစ်ကြသည်။ ည တော်တော်နက်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ကားငှားဖို့လည်း အဆင်မပြေဘူး မဟုတ်လား။ ကားပေါ်မှာ အချင်းချင်း အီးမေလ်းတွေပေး ၊ ဖုန်းနံပတ်တွေပေးဖြစ်ကြပြန်သည်။ ငြိမ်း အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည (၁၂) နာရီထိုးပြီး။ အိမ်တံခါးလာဖွင့်ပေးသော အဖေ့ကို ပြုံးရုံသာပြုံးပြရင်း အိပ်ရာထဲ တန်းဝင်ခဲ့သည်။ ခေါင်းအုံးနှင့်ခေါင်း ထိလိုက်သည်နှင့် ငြိမ်းတစ်ယောက် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျသွားခဲ့တော့သည်။
နောက်နေ့ တစ်နေ့လုံး ငြိမ်းတစ်ယောက် အလုပ်များနေပါသည်။ တနင်္လာနေ့လည်း ဖြစ်ပြန် ၊ Camp အတွင်းခွင့်ကလည်း ယူထားရပြန်သဖြင့် အလုပ်တွေ လုပ်မကုန်နိုင်အောင် ရှိနေတော့သည်။ ခါတိုင်းဆို ရုံးရောက်ရောက်ချင်း Gtalk ဖွင့် ၊ အီးမေလ်းစစ် လုပ်နေကျ။ ဒီနေ့အဖို့မှာတော့ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ရောက်မှသာ ဂျီတော့ကို တကူးတကဖွင့်ဖြစ်တော့သည်။ ဂျီတော့ဖွင့်လိုက်တော့လည်း အံ့သြရပြန်ပါသည်။ ဖြိုးပိုင်၏ အင်ဗိုက်ကို တွေ့ရသည်။ Facebook ဖွင့်လိုက်ပြန်တော့လည်း သူ့၏ Friend Request ကို တွေ့ရသည်။ ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးနေ ရယ်နေကြသည့်သူများကို တစ်ခြားသူများမှ ကြည့်ရယ်ကြလိမ့်မည်ဆိုပါလျှင် ဤတစ်ကြိမ်တွင် အရီခံရမည့်သူမှာ ငြိမ်းကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ သူမက သူ့ရဲ့ အင်ဗိုက်တွေ ၊ ရီကွက်စ်တွေကိုကြည့်ပြီး သဘောကျစွာ ပြုံးနေခဲ့သည်ကို။
လူသားများသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အချင်းချင်းတွေ့ဆုံရာတွင် သာမန်စကားများလောက်ကိုသာ ပြောဖြစ်ကြမည် ဖြစ်သော်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မမြင်ရ မဆုံရသည့် အင်တာနက်ဆိုသည့် ကြားခံတစ်ခုပေါ်တွင် စကားပြောဆို ချက်တင်လုပ်ကြသည့်အခါတွင်ကား ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း ပြောဆိုဖြစ်တတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် ဂျီတော့ပေါ်တွင် ချက်တင်လုပ်ခြင်းများကို ယနေ့ခေတ်လူငယ်များစွာ နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုလုပ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကား သံယောဇဉ်ပိုကာ မမြင်ရသည့် နှောင်ကြိုးများ ချည်ငင်မိတတ်ကြသည်။ သူမနှင့် ဖြိုးပိုင်သည်နေ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စကားပြောမိကြရင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယခင်ကထက် ပိုမိုနားလည်ခဲ့ကြရသည်။ ၀ါသနာလေးတွေအကြောင်း ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေအကြောင်းက အစပြုလို့ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးတွေထိပါ ငြင်းကြ ခုံကြရင်း သံယောဇဉ်တွေလည်း ထပ်ထပ်တိုးခဲ့ကြရသည်။ အချစ်တစ်ခု၏အစသည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်ခြင်းမှ အစပြုသည်ဟု ဆိုပါလျှင်… သူတို့နှစ်ဦးသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ နားလည်မှု တည်ဆောက်ပြီးကြပေပြီ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့ ရုံးဆင်း ချိန်များတွင် သူမတို့နှစ်ဦး တွေ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကား ဖြိုးပိုင်တစ်ယောက် ချစ်စရာ လက်ဆောင်လေးများဖြင့် ငြိမ်းတို့ ရုံးသို့ရောက်ချလာပြီး ငြိမ်းကို အံ့သြရအောင် လုပ်တတ်သေးသည်။ ဒီကြားထဲတွင်လည်း အဖွဲ့၏ မီတင်များကို ခဏ ခဏ သွားရသေးသဖြင့် တစ်လလောက်အတွင်း သူတို့နှစ်ဦး၏ တွေ့ဆုံမှုများက ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာသည်။ မျက်လုံးတွေလည်း မကြာခဏဆုံကြသည်။ သူနဲ့တွေ့တိုင်း ရင်ခုန်ရသည်မှာလည်း အကြိမ်တိုင်းပင်။ သို့သော် သူတို့နှစ်ဦးသည် သူတို့၏ အဖြစ်အပျက်များကို သူငယ်ချင်းများ မရိပ်မိအောင် လျှို့ဝှက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
“ဖြိုးပိုင်ကိုလေ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ Tokyo Donut” မှာ တွေ့တယ်သိတား.. သူ့ ကောင်မလေားး မသိဘူး”
ထွန်းထွန်းက ပြောတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ဟေ ဟုတ်လား .. ဒီကောင်လေးက မပြောမဆိုနဲ့တော် စသည်ဖြင့် တစ်ယောက် တစ်ပေါက်ထွက်လာကြသည်။ ငြိမ်းရဲ့ နှလုံးသားတွေ ပူကနဲ ဖြစ်သွားတာကိုတော့ တစ်ယောက်မျှ ရိပ်မိလိမ့်မည် မထင်ပါ။ အစကတည်းက စကားနည်းသော ၊ အနေအေးသော ငြိမ်းတစ်ယောက် ထိုနေ့က မီတင်တွင် စကားတစ်လုံးမျှ မပြောဖြစ်ခဲ့သည်ကိုလည်း သူငယ်ချင်းများက အထူတလည် မေးမြန်းခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ မိမိကိုယ် မိမိ အလိုမကျခြင်း များစွာနဲ့သာ ငြိမ်းတစ်ယောက် အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ရသည်။
ဂျီတော့ကို ဖွင့်တော့လည်း အော့်ဖ်လိုင်းဖြစ်နေသော သူ့ကိုသာ တွေ့ရသည်။ ခါတိုင်းဆို တစ်နေကုန်နီးပါး အွန်လိုင်းဖြစ်နေတတ်သူက ဒီနေ့ကျမှ ဘာလို့မရှိရတာလဲ ။ ဟိုကောင်မလေးနဲ့ သွားတွေ့နေတာလား.. စသည့်အတွေးများက ငြိမ်းကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ နှိပ်စက်နေကြသည်။ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်မှာပါလေလို့ ဖြေသိမ့်ကြည့်မိသည်။ အို… ငါက သူ့ရည်းစားမှ မဟုတ်တာ ဘာဆိုင်လို့ လိုက်ခံစားနေရတာလဲဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း အပြစ်တင်မိသည်။ ဒီလိုဆို ဘာလို့များ ငြိမ်သက်နေတဲ့ နှလုံးသားတွေကို လှုပ်ခပ်သွားအောင် လုပ်ခဲ့တာလဲကွယ်။ ဒါယောင်္ကျားလေးတွေ လုပ်နေကျ လုပ်ကွက်တွေပဲလား။ ငြိမ်သက်နေတဲ့ မိန်းမတွေကို လှုပ်ခပ်အောင်လုပ်နိုင်ရင် ယောင်္ကျားတွေက သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဂုဏ်ယူလေ့ရှိကြသတဲ့။ ရှင်က ဒီလိုလူမျိုးလား မောင်လေးရယ်။ ဟိုဟို ဒီဒီလျှောက်တွေးရင်း အိပ်မပျော်သည့် ညတစ်ညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါသည်။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ကျိုက်ထီးရိုးသွားတယ် ဆိုသည့် Update တစ်ခုကို သူ့ ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ဝေါမှာ တွေ့ရသည်။ ခါတိုင်းဆို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောနေကျ ဖြိုးပိုင်တစ်ယောက် မပြောမဆိုနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ရောက်သွားပြန်ပြီကောဟု တွေးရင်း စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်မိသည်။ ရှင့်ကို ကျွန်မ ပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး ဖြိုးပိုင်ရယ်။ အခုလိုတွေ လျှောက်လျှောက်တွေးနေမိတာကိုက ကျွန်မဘက်က သိပ်တရားလွန်နေပါပြီရှင်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ချောင်းသာက ဓါတ်ပုံတွေကို တင်ကြသည်။ အချင်းချင်း Tag လုပ်ကြသည်။ သူမ နှစ်သက်သော အပြုံးကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ဖြိုးပိုင်၏ ပုံတွေကလည်း အပြုံးတွေဖြင့် လှိုင်လှိုင်ဝေနေသည်။ အမှတ်တရတို့သည် နေ့စဉ်ဘ၀ထဲသို့ ကူးခတ်ကာ ရောက်ရှိလာကြပြန်ပေပြီ။ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော စနေ ၊ တနင်္ဂနွေကို မတင်မကျ စိတ်တစ်ခုဖြင့် ဖြတ်သန်းရသည်မှာ လေးလံလှပါသည်။
တနင်္လာနေ့ မနက်စောစော ဖုန်းမြည်သံကြောင့် နိုးလာပြီး နာရီကြည့်တော့ မနက် (၆) နာရီသာ ရှိသေးသည်။ သည်အချိန်က သူမ အိပ်ရာထချိန်မဟုတ်။ မလာစဖူး အလာထူးသည့် ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်တော့…
“အမကလည်းဗျာ.. ဖြိုးပိုင်ပါ.. ကျွန်တော့အသံတောင် မမှတ်မိတော့ဘူးလား”
“အား ဆောရီး ခုမှ နိုးလာတာဆိုတော့ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေလို့.. စောစောစီးစီး ဘာလို့လဲ မောင်လေး”
“အမကို တွေ့ချင်လို့ဗျ.. ညနေ (၆) နာရီလောက်ကို Tokyo Donut မှာ စောင့်နေမယ်နော်.. လာဖြစ်အောင် လာနော်.. ကျွန်တော် ခုမှ ကျိုက်ထီးရိုးက ပြန်ရောက်တာ.. ပင်ပန်းနေလို့ အိပ်လိုက်အုံးမယ်ဗျ”
သူ့ဘာသာသူပြော… သူ့ဘာသာသူချိန်းပြီး သူ့ဘာသာသူ ဖုန်းချသွားခဲ့သည်။ ဘယ်လိုလဲကွယ်။ ထိုနေ့ကလည်း တစ်နေကုန် အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဘာလို့ချိန်းတာလဲဆိုသည့် စိတ်တစ်ခုနဲ့အတူ ညနေ (၆) နာရီကိုသာ မျှော်နေမိတော့သည်။
ထိုနေ့ ညနေက သူမ လက်စွပ်ကလေး တစ်ကွင်း လက်ဆောင်ရသည်။ ထိုလက်စွပ်ကလေးသည် မြင်းမြီးဖြင့်လုပ်ထားသော နီညိုရောင် လက်စွပ်ကလေးဖြစ်ပြီး သူမ၏ လက်သူကြွယ်နှင့်လည်း အနေတော်ပင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငွေကြေးအားဖြင့် တန်ဘိုးမရှိသော်လည်း ဘ၀အတွက် လွန်စွာမှ တန်ဘိုးရှိလှသော ထိုလက်စွပ်ကလေးကို သူမလက်သူကြွယ်တွင် မြတ်နိုးစွာ ၀တ်ဆင်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုလက်ဆောင်ကို ဖြိုးပိုင်မှ ငြိမ်း အတွက် ကျိုက်ထီးရိုးမှအပြန်တွင် ၀ယ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်ကြား အချစ်တစ်ခုကို မွေးဖွားပေးခဲ့သော သင်္ကေတလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငြိမ်း၏ စိတ်ထဲမှ အလိုမကျမှုများ ၊ အထင်လွဲမှုများနှင့် နှလုံးသား၏ ပူလောင်မှုများကို ထိုလက်စွပ်မှ ကုစားပေးနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့သည်။ ဘယ်တော့မှ မချွတ်တမ်းဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သူမတို့နှစ်ဦးလုံး၏ လက်သူကြွယ်တွင်ရှိနေသော ထိုလက်စွပ်သည် ခိုင်မြဲသော အချစ်၏ မှတ်ကျောက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အချစ်ဟူသော လှေကားထစ်များကို အားမာန်အပြည့်ဖြင့် လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်မည့် ခွန်အား တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အချစ်သည် လောကကို လှပစေပါသည်။ ချစ်သူတို့သည်လည်း လောကကို အလှဆင်နေကြသူများထဲမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်။ ဘ၀ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ချစ်ခြင်းသည်လည်း အရေးပါပါသည်။ ချစ်ခြင်းဟူသော ခွန်အားသည် ဘ၀လှေကားထစ်ပေါင်းများစွာကို တစ်လှမ်းချင်း တက်လှမ်းဖို့ ခွန်အားကိုလည်း ပေးအပ်သည်။ ငြိမ်းသည်လည်းကောင်း ၊ ပိုင်သည်လည်းကောင်း ဘ၀လှေကားထစ်ကို အောင်မြင်သည်ထိ တက်လှမ်းနိုင်ရန် အချစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာတွင် အစပြုပြီး ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာတွင် ၀တ္ထုအဆုံးသတ်ပါသည်။
၁၉ – ၁၂- ၂၀၁၂
Posted on February 13, 2012 by cuttiepinkgold
အမှိုက်ကောက်တာဟာ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စည်းကမ်းမဲ့ ပြန့် ကျဲ နေတဲ့ အမှိုက်တွေကို လိုက်ကောက်ရတာဟာ ဂုဏ်ယူဖို့ ကောင်းတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာကမှ ရှက်စရာ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
ဒီခံယူချက်တွေနဲ့ Myanmar Youths in Action လို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့သားတွေ မကြာသေးခင်ကမှ ကျင်းပပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့တဲ့ Barcamp Yangon 2012 မှာ အမှိုက်ကောက်တဲ့ အစီအစဉ်လေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Barcamp လုပ်တဲ့ နှစ်တိုင်းမှာ flyer တွေ ၊ ဆေးလိပ်တိုတွေ ၊ စားကြွင်းစားကျန်တွေ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ပြန့်ကျဲနေတာကို တွေ့ခဲ့မိတာကြောင့် ဒီနှစ်မှာတော့ ကိုယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ အမှိုက်ကောက်တဲ့ အစီအစဉ်လေးကို လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီး တိုင်ပင်ကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် စည်းကမ်းတကျ အမှိုက်စွန့်ပစ်နိုင်အောင်လည်း အမှိုက်ပုံး သုံးလုံးတွဲ (9) စုံ စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို ဒီအစီအစဉ်လေး လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ Barcamp Organizer တွေကိုရော စည်းကမ်းတကျ အမှိုက်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဘားကမ့် တက်ရောက်သူများကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ အရင်ဆုံး ပြောပါရစေရှင်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲ စည်းကမ်းရှိအောင် လုပ်ပေး လုပ်ပေး စည်းကမ်းမရှိသူများလည်း ရှိပါတယ်ဆိုတာကို မပြောလို့လည်း မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ တစ်ခုခုတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်မတို့တွေက ဟိုဟာမရှိလို့ပါ ၊ ဒီဟာမရှိလို့ပါ ၊ အစိုးရက ဘာမလုပ်ပေးလို့ပါ ၊ ညာမလုပ်ပေးလို့ပါဆိုပြီး ထိပ်ဆုံးက အော်တတ်ကြပါတယ်။ ရှိတာလေးကို အခြေခံပြီး ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲကြမယ်ဆိုတာက နောက်မှ လာတဲ့ တော့ပစ်ပါ။ အခုလည်း ကျွန်မတို့က အမှိုက်ပုံးထားပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းမှာ ၊ ကော်ရစ်ဒါမှာ ၊ မြက်ခင်းပြင်မှာ လွှင့်ပစ်တဲ့သူတွေက ရှိဆဲပါပဲ။ အမှိုက်ပုံးက လက်တစ်ကမ်းတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ Canteen အထွက်မှာ ၊ Main Building အထွက်မှာ ၊ Function Hall အထွက်မှာ ၊ ကော်ရစ်ဒါတစ်လျှောက်မှာ စသည်ဖြင့် ကျွန်မတို့ ငှားလို့ရထားတဲ့ (9) စုံနဲ့ လောက်ငအောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမှိုက်ပုံးကလည်း ကျွန်မတို့ အပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွက် ထုတ်ပေးတဲ့ Popular Plastic Industry ကနေ မရ ရအောင် ငှားယူလာခဲ့တာပါ။
ကျွန်မတို့အဖွဲ့တွေ နှစ်နာရီခြား တစ်ခါ ၊ တစ်နာရီခြား တစ်ခါလောက်ကို Round လှည့်ပြီး တွေ့သမျှ အမှိုက်ကို လိုက်ကောက် ၊ ပြည့်လျှံနေတဲ့ အမှိုက်ပုံးတွေကို ရှင်း ၊ အိတ်အသစ်တွေ ထပ်သွပ်ပေးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက ကျွန်မတို့တွေ အမှိုက်ပစ်တဲ့ Practice ကို လေ့ကျင့်ရပါအုံးမယ် ဆိုတာပါပဲ။ အမှိုက်တွေကို ပစ်ဖို့အတွက် Papers / Cans and Bottles/ General Trash ဆိုပြီး ခွဲပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှိုက်တွေကတော့ အရောရောပါပဲ။ စာကိုပဲ သေချာ မဖတ်မိကြတာလား ၊ ပြီးပြီးရော ပစ်သွားကြတာလား ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့မှာ အမှိုက်တွေကို ပြန်ခွဲရတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ထပ်ပိုလာတာပေါ့ရှင်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေပါ။ တစ်ချို့တွေက မြက်ခင်းပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အအေးသောက် ၊ မုန့်စား ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အမှိုက်ပုံးနဲ့လည်း နီးနေလျက်နဲ့ မြက်ခင်းပေါ်မှာ အမှိုက်တွေကို ပစ်ချထားခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆို သူတို့ဘေးမှာ အမှိုက်တွေ ပြန့်ကျဲနေတာပါပဲ။ အဲ့ဒါကို ကျွန်မတို့က သွားကောက်တဲ့အခါ ရှက်ရှက်နဲ့ အမှိုက်တူတူ လိုက်သိမ်းပေးတဲ့ သူမျိုးလည်း ရှိသလို အမှိုက်ကောက်နေတဲ့ ကျွန်မတို့အနားမှာ တမင် တကာ အမှိုက်ပစ်ချတဲ့ သူမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က တစ်ချို့ Barcamp Volunteer တွေပါ။ အမှန်ဆို ဒီ အစီအစဉ်အတွက် အားလုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားပေမယ့် ရေသာခိုချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း လူတစ်ချို့မှာ တွေ့ရတာပါပဲ။ “ဟိုမှာ အမတို့သိမ်းဖို့ အမှိုက်တွေ ပုံထားတယ်။ သွားသိမ်းလိုက်ပါအုံး” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ပြောထွက်ကြပါတယ်။ ဘားကမ့်ကို တက်ရောက်လာသူတွေ အမှိုက်ကို ပြီးပြီးရော ပစ်ချခဲ့တာကို အပြစ်မပြောလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့ အမှိုက်သိမ်းရလို့လည်း စိတ်ဆိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အများကောင်းကျိုးအတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Barcamp Volunteer တစ်ချို့ကိုယ်တိုင်မှာ ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်ချင်စိတ် မရှိတာကို တွေ့ရလို့ ၀မ်းနည်းရုံ သက်သက်ပါ။ စားကြွင်း စားကျန်တွေကို လိုက်သိမ်းတဲ့အခါ ခွေးတစီစီနဲ့ ဖြစ်နေတာ ၊ ခွေးနဲ့အပြိုင် အမှိုက်လုရတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘေးနားက ဖြတ်သွား ဖြတ်လာတွေ ဘယ်သူမှ “ဟဲ့ ခွေး” လို့ ကူမောင်းပေးခဲ့တာမျိုး မကြုံခဲ့ရပါဘူး။
ကျွန်မတို့ကို အမှိုက်ကောက်တဲ့ အဖွဲ့တွေလို့ ခေါ်တာကို ကျွန်မတို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ စကြ နောက်ကြတာကိုလည်း ကျေနပ်ပါတယ်။ ပျော်လည်း ပျော်ပါတယ်။ တစ်ခြားပွဲတွေမှာလည်း အခွင့်သာရင် သာသလို လိုက်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ဟာ စည်ပင်သာယာက ၀န်ထမ်းတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ကျွန်မတို့အားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်ခွင်မှာ နေရာတစ်ခု ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်က ကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။ ကျွန်မတို့ အမှိုက်ကောက်တယ်ဆိုတာ အများသူငှာ လိုက်လုပ်လာအောင် ပညာပေးတာပါ။ ကျွန်မတို့ အမှိုက်ကောက်တာဟာ လူတွေကို ဒါမျိုးလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ Practice လေး ရှိစေချင်လို့ပါ။ နောက်နောင်လည်း လုပ်သွားအုံးမှာပါ။
ဒါပေမယ့်……….. တစ်ခုတော့ ပြောချင်လို့ပါ။
ကျွန်မတို့နဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပါ။
ကျွန်မတို့နဲ့ အလေ့ အကျင့် လိုက်လုပ်ပါ။
ကျွန်မတို့နဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း နှိမ့်ချ မဆက်ဆံကြပါနဲ့ဆိုတာလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
Filed under MYIA and tagged Barcamp Yangon 2012 |	5 Comments
Posted on January 27, 2012 by cuttiepinkgold
ကျွန်မလည်း နာမည်ကြီး တစ်ယောက်ပါ။ မယုံဘူးလား…. ကျွန်မ အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ Facebook Account တက်လာပြီး မဟုတ်တရုတ်ပုံတွေတင် ၊ ကျွန်မရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ကျွန်မပါဆိုပြီး လိုက်ပြ ၊ မဟုတ်က ဟုတ်က Caption တွေတောင် ထိုးထားသေးတာရှင့်။ ကျွန်မ ကြားဖူးတာကတော့ မင်းသမီးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဖြတ် ညှပ် ကပ် တွေလုပ်ပြီး ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်မအဖို့မှာတော့ ကျွန်မနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ပုံကို တင်ပြီး ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင် လုပ်ခံရတာပါ။ ကျွန်မ ပုံကို ဖြတ် ညှပ် ကပ် မလုပ်ထားတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရအုံးမယ်။
ကျွန်မ စဉ်းစားလို့ မရတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာကြောင့်များ ၊ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့များ ဒီလို လုပ်ရတာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့။ ကျွန်မမှာ မိတ်ဆွေတွေပဲ ရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ ၊ ခုမှပဲ ရန်သူလည်း ရှိမှန်း သိရတော့တယ်။ ကျွန်မ ဘယ်သူကို ဘယ်လိုများ မကောင်း လုပ်ခဲ့တာပါလိမ့်။ ဘာမှ မလုပ်ပဲနဲ့တော့ သူလည်း ဒီလို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိကြီးနဲ့ လိုက်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ လုပ်ရပ် တစ်ခုခုက သူ့ကို ထိခိုက်သွားတာ (သို့မဟုတ်) ကျွန်မကို အမြင်မကြည်လင် ဖြစ်သွားစေတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ မနာလို ၀န်တိုလို့ လုပ်တယ်ရယ်လို့တော့ ကျွန်မ မစွပ်စွဲလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မမှာ သူများ မနာလိုဖြစ်လောက်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့မဟုတ်) အရည်အချင်းမှ မရှိတာကြီးကိုရှင်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အဲ့ဒီလူဟာ ကျွန်မကိုရော ၊ ဓါတ်ပုံရှင် မိန်းကလေးကိုရော နှစ်ယောက်လုံးကို ထိခိုက်အောင် လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ သူ့ပုံတွေကို ကျွန်မဆိုပြီး ထင်ယောင် ထင်မှား လုပ်ခံရတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီ ဓါတ်ပုံရှင် မိန်းကလေးလဲ သိပုံမရပါဘူး။ ဒီ လုပ်ရပ်ဟာ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းကိုသာမက ၊ အဲ့ဒီ မိန်းကလေးကိုပါ ထိခိုက်နစ်နာသွား စေခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ တို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အနေ အထိုင်ကို ပိုပြီး ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်ရပ်က သာဓက ပါပဲ။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်တာပါ။ ကျွန်မှာသာ Online ပေါ်မှာ နာမည်အရင်းနဲ့ မဟုတ်ပဲ နာမည်ကိုသာသိပြီး ဒီလူဟာ ဘယ်သူမှန်း မသိ ၊ ဘယ်နေရာက မသိတဲ့ ပုံမျိုးနဲ့သာ နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အဖော် ၊ အချွတ်တွေ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံရှင်ကို ကျွန်မပါလားလိုပြီး လူအများက တွေးကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ အခုတော့ ကိုယ်က ဘယ်သူဆိုတာလဲ လူတိုင်းက သိနေတယ် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Identity ကို အပြည့် ဖော်ပြပေးထားတာကြောင့် ကျွန်မက ဒါမျိုး မလုပ်ဘူးဆိုတာ သူငယ်ချင်းတိုင်း ယုံကြည်ပေးကြတာပေါ့။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Identity ကို ပြတာဟာ မသမာသူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ Information ကို အလွယ်တကူ ရယူပြီး မကောင်းကြံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ရဲ့ အဖြစ်ကလည်း တစ်ကယ်တော့ အကြောင်းသိ တစ်ယောက်က တမင်သက်သက် လုပ်ကြံသွားတာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ ကျွန်မရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိုင်းကို ဓါတ်ပုံတွေကို Tag လုပ်ပြီး ပြထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် နေခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးလည်းရှိသလို ၊ ဆိုးကျိုးလည်း ရှိတာပါပဲ။
မိန်းကလေးတိုင်း အလှ အပ မက်ပါတယ်။ လှလည်း လှချင်ကြတယ်ဆိုတာ မိန်းမ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မလည်း ၀န်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလှအပကို တစ်ခြားသူတွေ မြင်သာအောင် ပြသတတ်ကြတာလည်း သဘာဝ ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ မတူနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့က လှတာကို သိရုံပြကြတယ် ၊ အဲ တစ်ချို့ကတော့ လှတာကို သိပြီး ၊ သိတာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တစ်ခြား အကျိုးဆက်တွေပါ ပါလာအောင် ပြကြတယ် ၊ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း မင်းသမီးတွေကို အားကျပြီး သူတို့တွေလို စတိုင်လ်မျိုးစုံနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတယ် ၊ တစ်ချို့က ကျပြန်တော့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း နောက်ပြောင်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတယ်။ ဒီပုံတွေက ကိုယ်တိုင် တင်လို့ သော်လည်းကောင်း ၊ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က နောက်ပြောင်ပြီး တင်လိုက်လို့ သော်လည်းကောင်း အွန်လိုင်းပေါ်ကို ရောက်လာကြတယ်။ ဒါကို သိတဲ့ ကာယကံရှင်တွေလည်း ရှိသလို ၊ မသိတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆင်ခြင်ရမှာကတော့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးတာဟာ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိသလို ၊ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နာမည်ကြီးအောင် ဆိုပြီးတော့တော့ မိန်းကလေးတွေ တမင် တကာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ မင်းသမီးတွေ နာမည်ကြီးအောင် လုပ်တာ တရားနည်းလမ်း ကျပါတယ်။ သူတို့က နာမည်ကြီးမှ အလုပ်ဖြစ်မှာကိုးရှင့်။ သာမန် မိန်းကလေးတွေ အဖော် အချွတ်ပုံတွေနဲ့ နာမည်ကြီးရင်တော့ ဆိုးကျိုးတွေပဲ ရှိမှာပါပဲ။
ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံဟာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကို ထိခိုက်စေသလို ၊ ကိုယ် မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကိုလည်း လုပ်ကြံလို့ ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာ သတိလေး ချပ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်က စပြီး လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ကြရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း တန်ဘိုးမြှင့်တင်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ကျွန်မက ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Filed under Face Book |	1 Comment